हामी किन यो पुरानो लागि यस्तो नराम्रो भावनाको साथ भित्र पस्छौं Betsoft स्लट खेल अब मोबाइल मा जारी? ठीक छ, एकका लागि, यस स्लटमा प्लेयर दरमा फिर्ती 93.8% मा कम छ। 97% लाई तुलना गर्नुहोस् उनीहरूको हालसालका मोबाइल स्लट रिलिजहरू जस्तै साँचो भ्रम र नाइट फल्स पछि स्लटहरू र हामीले चाँडै नै हाम्रो दिमाग बना्यौं कि यो मोबाइल स्लट मेसिन हाम्रो समयको लागि लायक छैन।
तर, हामी खेलिरहे। हामीले करीव2घण्टा सम्म खेलायौं। र हामीले स्वीकार्नु पर्छ कि हामी गलत थियौं। यस डकैतीको अन्त्यमा एक भुक्तानी दिन रहेको छ, यद्यपि यसले तपाईंलाई युवा रिटायर हुन दिदैन।
बोनस खेलहरू apleple साथ एक भिडियो स्लट
सँधै जस्तो तपाईले सबै विशेष सुविधाहरूको डाउनडाउन पाउन हाम्रो बोनस सुविधाहरू सेक्सन पढ्नुपर्नेछ। अन्यथा यो हिसाब मोबाइल स्लट समीक्षा 10 पृष्ठ लामो हुनेछ।
यो खेल मनोरन्जनको बारेमा हो। यो ती मध्ये एक स्लट मेसिनहरू जस्ता खेल्दछ जहाँ तपाइँलाई एक ठूलो भुक्तानी प्राप्त गर्न सुविधा हिट गर्नुपर्दछ र त्यो सत्य हो किनकी। तर सुविधाहरू सबै यति अक्सर आउँछन् र नियमितताको साथ यो लाग्दैन कि तपाईं धेरै जीत स्पिन्स खेल्दै हुनुहुन्छ।
विस्तारित जंगली एक हो जसले हामीलाई सबैभन्दा धेरै चकित गर्‍यो। यो बाँकी जस्तो प्रायः आउँदैन, तर 2x गुणक र एक राम्रो शटको साथ एक प्रकारको5मा, हामीले हाम्रो बाजी 50x मा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जीत पायौं। तपाइँले नि: शुल्क स्पिनहरू पाउन सक्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् सुविधा दुर्लभ र अप्रत्याशित छन्। एकचोटि हामी 26x हाम्रो शर्तसँग खुसी भयौं, अर्को पटक हामी हाम्रो बाजीको दुईपटक मात्र बाहिर गयौं।
तर यो सुरक्षित क्र्याकिंग बोनस हो जसले हाम्रो ध्यान सबैभन्दा बढी राख्यो, वास्तविक बैंकको जागिरमा भएको अनौंठो अनुभूतिसहित जब तपाइँले पत्ता लगाउनबाट बच्नको लागि वाल्ट छोड्नु पर्ने हुन्छ। धेरै छिटो छोड्नुहोस् र तपाईंसँग धेरै पैसा छैन, ढिला ढिला छोड्नुहोस् र तपाईंलाई केही नतोड्ने समातिएर जानुहुन्छ।
Heist स्लट मात्र जाँदै छ
यो खेल तपाईंलाई एक स्लोशिएयर बनाउन गइरहेको छैन। त्यहाँ कुनै मेगा ज्याकपट्स छैनन्, त्यहाँ कुनै भव्य अनावरण गरिएको छैन जहाँ तपाईं आफ्नो धितो फर्काउन सक्नुहुन्छ। तर तिमीलाई थाहा छ? हामी भर्खरै खेलिरह्यौं। हामीले आफैलाई वचन दिएका थियौं कि हामी अर्को सुविधामा रोक्छौं, र अचानक हामीले 30 फ्री स्पिनहरू पाउनेछौं जब हामी पहिले मात्र5पाउँदछौं।
हामीले आफैलाई5खराब वॉल्ट heists पछि भन्यौं कि अब छैन! यो स्लट को लागी गरीएको छ! र हामीले अचानक हामीले देखेको भोल्टमा सब भन्दा ठूलो भुक्तानी लियो। यस्तो लाग्यो कि हाम्रो बैंक रोल यो र यो पछाडि पछाडि 'यो हो, अन्तिम दस स्पिनहरू' लाई 'हू हू! हामी फर्क्यौं बच्चा! ' सामान्य हुनु भन्दा बढी पटक।
मोबाइलमा Heist स्लट यहाँ मनोरन्जन मात्र छ। हाम्रो सल्लाह? यदि तपाइँ आफैलाई 20% पाउनुभयो भने तपाइँको सुरू बजेटबाट आफैलाई भाग्यशाली मान्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अन्यथा यस स्लटलाई घण्टा र घण्टाको लागि अन्तमा खेल्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई थप चाहना गरिरहन्छ।
(भाग्यमानी नोट: हामी पछिल्लो र सबै भन्दा राम्रो क्यासिनो बोनस पठाउछौं जब हामी तिनीहरूलाई पाउँछौं
हिसाब मोबाइल अपडेट गरिएको: जनवरी 15, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 हिसाब मोबाइल
2.0.0.1 प्रेतवाधित रात
2.0.0.2 समुद्रको धन
2.0.0.4 अफ्रीका को किंवदंतियों
2.0.0.5 रगत रील गर्नुहोस्
2.0.0.6 नमस्कार हेलोवीन
2.0.0.8 यसका लागी उनीहरुसँगको कुराकानी